အိန္ဒိယပြည်တွင်းလေယာဉ်တစ်စင်း ရုတ်တရက်လေပွေလှိုင်းမိ၍ ခရီးသည် ၁၇ ဦးဒဏ်ရာရ - Xinhua News Agency
နယူးဒေလီ ၊ မေ ၂ ရက်(ဆင်ဟွာ)
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ ဈေးနှုန်းချိုသာသော ပြည်တွင်းလေကြောင်းလိုင်းတစ်ခုမှ လေယာဉ်တစ်စင်းသည် မေ ၁ ရက် နှောင်းပိုင်းက လေယာဉ်ကွင်းသို့ ဆင်းသက်စဉ် ရုတ်တရက်လေပွေလှိုင်းတစ်ခုဖြင့်ကြုံတွေ့ခဲ့ရာ အနည်းဆုံး ခရီးသည် ၁၄ ဦး နှင့် လေယာဉ်အမှုထမ်း ၃ ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်း မီဒီယာက ယနေ့ မေ ၂ ရက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။
ဘိုးရင်း ၇၃၇ ခရီးသည်တင်လေယာဉ်ကြီးသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးမြို့တော် မွမ်ဘိုင်းမြို့မှ အနောက်ဘင်ဂေါပြည်နယ်ရှိ ဒူဂါပူမြို့(Durgapur) သို့ဦးတည်ပျံသန်းစဉ် ယင်းမတော်တဆမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း NDTV ရုပ်သံလိုင်း၏ ဖော်ပြချက်အရသိရသည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံ၌ မေ ၂ ရက်တွင် လေပွေလှိုင်းမိသဖြင့် လေယာဉ်ပေါ်ပါ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ ပြုတ်ကျနေသည့်မြင်ကွင်းတစ်ခုအား တွေ့ရစဉ်(ဓာတ်ပုံ-အင်တာနက်)
ခရီးသည် ၁၈၈ ဦး တင်ဆောင်လာခဲ့သော အဆိုပါ စပိုက်ဂျက်လေယာဉ်သည် ဒူဂါပူလေဆိပ်သို့ မဆင်းသက်မီ ကြီးမားသော လေပွေလှိုင်းတစ်ခုဖြင့် ကြုံတွေ့ခဲ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ လေပွေလှိုင်းထဲ လေယာဉ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သွားစဉ် လေယာဉ်တုန်ခါမှုကြောင့် ခရီးသည်ထိုင်ခုံအထက်ရှိ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။(Xinhua)
17 injured after India’s domestic flight encounters mid-air turbulence: media
NEW DELHI, May2(Xinhua) — At least 14 passengers and three crew members were injured inamassive mid-air turbulence that hitalow-cost airline’s flight in India late on Sunday, local media reported Monday.
The Boeing 737 passenger plane flew from India’s financial center Mumbai to Durgapur in the eastern state of West Bengal, according to the NDTV report.
The SpiceJet flight carrying 188 passengers experiencedamassive mid-air turbulence before landing at the Durgapur airport. During the turbulence the luggage kept in overhead cabin fell off, injuring passengers. Enditem